Aside – Palpapati
विष्णु घिमिरे पाल्पा ११, वैशाख कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि वाहिरी जिल्लावाट आउने तरकारीमा लगाइएको प्रतिवन्ध पाल्पामा प्रहरीकै मिलेमतोमा उल्लधन भएको पाइएको छ । फलफुल, टमाटर र तरकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र तानसेनका अन्य व्यापारीलाई विक्री गरि बुर्तिवाङ जाने तयारी हिडेको जिपलाई गयराती निन्त्रणमा लिएपछी यस्तो खुलासा भएको हो । बुटवलवाट हिडेको लु १ च […]
April 21, 2020 April 21, 2020 Bishnu489
पाल्पा ९ बैशाख विष्णु घिमिरे नेपाली काँग्रेस बगनासकाली गाउ समितिले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि बगनासकाली गाउपालिकालाई ५० हजार १ सय ११ रुपैया सहयोग गरेको छ । नेपाली काँग्रेस बगनासकाली गाउसमितिका सभापति यमलाल तिमिल्सेनाले अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्याल र उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीलाई रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन भएपछी गरिव तथा विपन्न वर्गका […]
January 9, 2020 January 9, 2020 Bishnu350
काठमाण्डौं,पुष २४ । राम नेपाल । मलेसियामा कार दुर्घटना हुँदा दुई जना नेपालीको ज्यान गएको छ । क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै बिहीबार बिहान कार दुर्घटना हुँदा दोलखाका २९ वर्षीय राजकुमार श्रेष्ठ र सुर्खेतका २३ वर्षीय रमेश पोख्रेलको ज्यान गएको मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । हीबार बिहान कम्पनीमा खाजा पुर्‍याउन हिँडेका श्रेष्ठ र पोख्रेल […]
January 2, 2020 January 2, 2020 Bishnu355
पाल्पा,पुष १७ । मानिसहरूले खानपानमा विशेष ध्यान दिन्छन् । भोजनमध्ये प्याज पनि एक हो जो नेपाल, भारत लगायतका देशमा आलुपछि बढी प्रयोग गरिन खाद्य पदार्थमा पर्छ । लगभग सबैजसो भान्सामा प्याजको प्रयोग हुन्छ । प्याजका कयौं गुणहरू रहेका छन् । यो एक बेजोड खालको औषधि पनि हो । प्याजको प्रयोग धेरै रोगको उपचारको लागि हुने […]
December 30, 2019 Bishnu581
पाल्पा,पुष १४ । सुनिल कार्की । तिनाउ गाउँपालिकाको आयोजनमा वडा नं ३ को चौकिभञ्याङ र ज्यामिरेमा निशुल्क बृहत एकिकृत घुम्ति शिविर सम्पन्न भएको छ । जनताका आधारभुत आवश्यकता मध्येको ६ प्रकारका सेवा सुविधा लिएर तिनाउ गाउँपालिकाको टोली प्रत्येक वडाका घर घरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा देखि विउँविजन सम्मका सेवा निशुल्क प्रदान गरेको छ । उक्त एकिकृत […]
December 30, 2019 December 30, 2019 Bishnu485
इन्सेकमा आवद्ध रही जिल्लाको मानवअधिकार प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भन्दै इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि सम्मानित हुनुभएको छ। बगनासकाली गाउँपालिकाको आयोजनामा बगनाकाली गाउँपालिका –५ दर्लमडाँडामा सञ्चालित प्रथम दर्लम महोत्सवको अवसरमा पुस १२ गते उहाँलाई सम्मान गरिएको हो । पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा मन्त्री परिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व उद्योग मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य […]
December 29, 2019 December 29, 2019 Bishnu834
पाल्पा,पुष १३ । सुनिल कार्की । जिल्ला ट्रफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाको आयोजनामा सप्ताहाब्यापी ट्राफिक सचेतनामुलक कार्यक्रम सुरु भएको छ । पछिल्लो समय पाल्पामा बढेको सवारि दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न एक हप्ते सचेतनामुलक कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । मानविय कामजोरी र सडक अवस्थाकै करण दुर्घटना बढेकाले सवारि चालक र यात्रु लक्षीत सचेतनामुलक अभियानलाई तिव्रता दिईएको […]
December 29, 2019 December 29, 2019 Bishnu493
पाल्पा पुष १३ । सुनिल कार्की । तिनाउ गाउँपालिकाको वडा न. २ दोभानमा सञ्चालन भएको दोस्रो अध्यक्ष कप रनिङशिल्ड भलिबल प्रतियोगिताको उपाधी वडा न. १ ले चुमेको छ । गत बर्षको बिजेता वडा न. ५ लाई २–० ले स्तब्ध पार्दै उपाधी हात पारेको हो । प्रतियोगितामा वडा न ६ तेस्रो तथा वडा न २ सान्त्वना […]
December 27, 2019 December 27, 2019 Bishnu346
पाल्पा,पुष ११ । कर्मचारी समायोजनमा पाइलैपिच्छे त्रुटि भेटिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसलाई सच्याउने गृहकार्य थालेको छ । समायोजनमा कमजोर र निरीह कर्मचारी मात्र खटाउने काम भएको भन्दै मन्त्रालयले सकेसम्म त्यसलाई सुधार गर्न गृहकार्य थालेको जनाएको छ । अघिल्ला मन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा कर्मचारी समायोजनमा प्रशस्त त्रुटि भेटिएको भन्दै उनको आलोचनासमेत भएको थियो । ‘एउटा विषयको […]
December 26, 2019 Bishnu400
पाल्पा,पुष १० । दयाराज न्यौपाने । सेन माध्यमिक बिद्यालय तानसेन पाल्पाको ब्यवस्थापन समिति पुर्नगठन भएको छ । कृष्ण राज अधिकारीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय बिद्यालय ब्यस्थापन समिती पुर्नगठन भएको हो । जस्को सदस्यमा कमलराज तिमिल्सिना, बोध लक्ष्मी ज्ञवाली ,कुम्भ सिं राना, डिला कुमारी खाती ,साबित्रा बिक रहनुभएको छ । गत पुस ८ गते अभिभावकहरुको भेलामा निर्वाचन […]